warkii.com » Christian Pulisic vs Eden Hazard: Waa Sidee Waxqabadka Labada Xiddig Sannadkoodii Ugu Horreeyey Ee Stamford Bridge?
Christian Pulisic vs Eden Hazard: Waa Sidee Waxqabadka Labada Xiddig Sannadkoodii Ugu Horreeyey Ee Stamford Bridge?
Frank Lampard ayaa isbarbar-dhig ku sameeyey Christian Pulisic iyo Eden Hazard kaddib markii ay dhamaatay ciyaartii ay Arbacadii guul-darrada 5-3 ah kala soo laabteen Liverpool oo ay marti ugu ahaayeen Anfield.
Christian Pulisic ayaa beddel kusoo galay ciyaartaas, waxaanu saamayn weyn ku yeeshay kulanka iyadoo uu caawiyey gool daqiiqado kaddib markii uu garoonka soo galay, waxaana uu ka dambaysay gool kale oo uu isagu dhaliyey.
Xili ciyaareedkan oo ah kii ugu horreeyey, waxa uu dhamaan tartamada saftay 32 kulan oo uu dhaliyey 10 gool iyo afar kale oo uu caawiye ka noqday, waxaana bandhiggiisana uu keenay in Frank Lampard uu barbar-dhigo Eden Hazard.
Lampard oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi: “Aad ayuu muhiim noogu yahay. Wuxuu leeyahay saamayntaas. Halkan ayaan joogay xili ciyaareedkii ugu horreeyey ee Hazard, mana aha mid fudud horyaalka Premier League xili ciyaareedka ugu horreeya, xataa Eden sannadkiisii ugu horreeyey, waanu la qabsaday. Christian isaguna waqtigiisa ayuu qaadanayaa.
“Tan iyo badhtamihii xili ciyaareedka, wuxuu dhab ahaantii ku taagnaa dariiq wanaagsan, tan iyo intii ay ciyaaruhu dib usoo laabteen, wuxuu ku jiray qaab ciyaareed cajiib ah.”
Xili ciyaareedkiisa ugu horreeyey, waxa uu Christian Pulisic la kowsaday ka hor intii aanu u dabbaal-degin xafladda dhalashadiisa 21aad, sidaas oo kale waxa ahaa Eden Hazard.
Christian Pulisic waxa uu illaa hadda caawiye ka noqday afar gool oo kaliya horyaalka Premier League ah, halka uu Eden Hazard xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey 11 gool caawiyey.
Laakiin labadan ciyaartoy waxa ay is dheer yihiin kulamada ay kusoo bilowdeen safka koowaad ee Chelsea, waxaana suurtogal ahaan lahayd inay isasoo gaadhi lahaayeen. Halka uu Hazard 31 ciyaarood kusoo bilowday kulamadii horyaalka ee kooxdiisa ee fasal ciyaareedkiisii ugu horreeyey, Pulisic waxa kaliya uu shaxda koowaad ee Lampard kusoo baxay 18 ciyaarood.
Sawirkan ayaa muujinaya xogta labada ciyaartoy ee xili ciyaareedkoodii ugu horreeyey ee Chelsea